1 Samuel 1 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
1 Ná ɔbarima bi wɔ hɔ a ofi Ramataim-Sofim,+ Efraim+ bepɔw so a ne din de Elkana.+ Ɔyɛ Suf+ ba Tohu ba Elihu ba Yeroham ba; ɔyɛ Efraimni. 2 Ná ɔwɔ yerenom baanu, obiako din de Hanah, na obiako nso din de Penina. Ná Penina wɔ mma, na Hanah de, onni ba.+ 3 Afe biara, ɔbarima yi fi ne kurom kɔ sɛ ɔrekɔkotow+ na wabɔ afɔre ama asafo Yehowa wɔ Silo.+ Ɛhɔ na na Eli mma baanu, Hofni ne Finehas,+ di Yehowa asɔfo.+ 4 Na da biara a Elkana bɛbɔ afɔre no, ɔma ne yere Penina ne ne mmabarima ne ne mmabea nyinaa kyɛfa, obiara ne ne de;+ 5 na Hanah de, ɔma no kyɛfa biako. Hanah na na ɔdɔ no,+ nanso na Yehowa ato ne yafunu mu.+ 6 Ne kora no nso yii no ahii+ sɛ ɔde behuru ne bo, efisɛ Yehowa ato ne yafunu mu. 7 Saa na na ɔyɛ afe biara;+ bere biara, sɛ ɔforo kɔ Yehowa fie+ a, saa ara na oyi no ahii, ɛno nti osũ, na onnidi. 8 Ɛnna ne kunu Elkana ka kyerɛɛ no sɛ: “Hanah, dɛn nti na wusu, na dɛn nti na wunnidi, na dɛn nti na wo koma abotow?+ Minye mma wo nsen mmabarima du+ anaa?” 9 Bere a wodidii Silo na wɔnom wiei no, Hanah sɔree, nso na ɔsɔfo Eli te agua so Yehowa asɔrefie+ no apongua ho. 10 Ná ɔbea no kra werɛ ahow,+ na ɔbɔɔ Yehowa mpae,+ na osui pii.+ 11 Na ɔkaa ntam+ sɛ: “O asafo Yehowa, sɛ wohwɛ w’afenaa amanehunu+ na wokae me,+ na wo werɛ amfi w’afenaa, na woma w’afenaa ɔbabarima a, ɛnde mede no bɛma Yehowa ne nkwa nna nyinaa, na oyiwan renka ne ti.”+ 12 Bere a ogu so rebɔ mpae tenteenten+ Yehowa anim no nyinaa, na Eli rehwɛ n’ano. 13 Hanah de, ɔkasae ne koma mu,+ na n’ano na ɔbesebesee; ne nne de, wɔante. Nanso Eli buu no sɛ wabow nsã.+ 14 Ɛnna Eli ka kyerɛɛ no sɛ: “Da bɛn na wobɛbow nsã akosi?+ Yi wo nsã no fi w’ani so.” 15 Na Hanah buae sɛ: “Ɛnte saa, me wura! Meyɛ ɔbea a me honhom abotow; bobesa ne mmosã de, mennom bi, na mmom merehwie me kra agu Yehowa anim.+ 16 Mmu w’afenaa ɔbea huhuni,+ efisɛ me haw ne m’awerɛhow dodow mu na makasa abesi sesɛɛ yi.”+ 17 Ɛnna Eli buae sɛ: “Fa asomdwoe kɔ,+ na Israel Nyankopɔn mma wo w’abisade a wode too n’anim no.”+ 18 Na ɔno nso kae sɛ: “Ma w’afenaa nnya w’anim dom.”+ Na osiim kɔe kodidii,+ na n’anim ammotow bio.+ 19 Na wɔsɔree anɔpatutuutu kɔkotow Yehowa anim, na wɔsan baa wɔn fie wɔ Rama.+ Na Elkana kɔɔ ne yere Hanah ho,+ na Yehowa kaee no.+ 20 Na afe kɔ behyiae no, Hanah nyinsɛnee, na ɔwoo ɔbabarima, na ɔtoo no din+ Samuel, efisɛ ɔkae sɛ, “Yehowa nkyɛn na mesrɛɛ+ no.” 21 Bere dui, na ɔbarima Elkana ne ne fiefo nyinaa kɔe sɛ ɔrekɔbɔ afirihyia afɔre ama Yehowa+ de ne bɔhyɛ ade ama.+ 22 Na Hanah de, wankɔ,+ na ɔka kyerɛɛ ne kunu sɛ: “Sɛ abofra no twa nufu+ ara pɛ a, mede no bɛkɔ, na wakopue Yehowa anim, na watena hɔ daa.”+ 23 Ɛnna ne kunu+ Elkana ka kyerɛɛ no sɛ: “Yɛ nea eye w’ani so,+ na tena fie kosi sɛ wubetwa no nufu. Yehowa asɛm ara na ɔmma ɛmmra mu.”+ Na ɔbea no tenaa fie hwɛɛ ne ba kosii sɛ otwaa no nufu.+ 24 Enti bere a otwaa no nufu no, ntɛm ara na ɔfaa no kaa ne ho, na ɔfaa nantwinini a wadi mfe abiɛsa ne esiam efa biako ne bobesa+ ahina mã, na ɔde no baa Yehowa fie wɔ Silo.+ Ná abofra no ka ne ho. 25 Na wokum nantwinini no, na wɔde abofra no brɛɛ Eli.+ 26 Ɛnna ɔbea no kae sɛ: “Me wura, mepa wo kyɛw! Sɛ́ wo kra te ase yi,+ me wura, mene ɔbea a obegyinaa wo nkyɛn ha bɔɔ Yehowa mpae no.+ 27 Abofra yi ho mpae na mebɔe sɛ Yehowa nyɛ m’abisade+ a mede too n’anim no mma me no.+ 28 Na me nso mede no rema Yehowa.+ Ne nna a ɔde bɛtena ase nyinaa, mede no ama Yehowa.” Na ɔkotow Yehowa+ wɔ hɔ.